आसेपासे रोक्न लोकसेवा- विचार - कान्तिपुर समाचार
असार २, २०७६ सोमबहादुर थापा
अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्र्यु ज्याक्सनले ४ मार्च १८२९ मा कार्यभार सम्हाले । लगत्तै उनले ९८१ कर्मचारीलाई निकाले अनि राजनीति र प्रशासनमा कुनै योग्यता, अनुभव र क्षमता नभएका आफ्ना नातेदार, साथी र पार्टी कार्यकर्ता तथा सहयोगीलाई जागिर दिए । कर्मचारीलाई आफूप्रति वफादार बनाउन ज्याक्सनले जागिर दिएपछि लुट वा विकृत प्रणाली बढी चर्चामा आयो ।
प्राचीन समयमा सबै देशकोराजनीति र प्रशासनमा चलनचल्तीमा रहेको यो प्रणाली यसपछि सबैतिरका राजनीतिक नेताको उच्च प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो ।
लुट प्रणालीले योग्यता, क्षमता, अनुभव र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई उपेक्षा गर्छ । संसारभरिका सबै मान्छेको मागभने योग्यता र क्षमता तथा अनुभवको प्रणालीको कार्यान्वयन हो । तर अहिले पनि प्रायः देशको राजनीति र प्रशासनमायो प्रणाली हावी छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो ।
लुट प्रणालीको मुख्य नियत नै विपक्षी मतदाता वा विपक्षी पार्टीका समर्थकलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु र आफ्ना मान्छे वा समर्थकलाई जागिर दिई आफूप्रति सदासर्वदा वफादार राख्नु हो । कुनै पनि देशको शासकलाई योभन्दा बढी के चाहियो ?
जनताले तिरेको कर जनताको आर्थिक–सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा कानुन बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, उल्टो भइरहेको छ । सत्ता जोगाउन पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकलाई जागिर दिएर करको दुरुपयोग गर्न पाइन्न भन्ने आवाज संसारभर उठिरहेको छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति ज्याक्सनले विरोधका बावजुद सन् १८२९ देखि सुरु गरेको लुट प्रणाली १८८१ सम्म कायम रह्यो ।
जागिर नपाएको झोँकमा चार्ल्स जे गुइटले बीसौं राष्ट्रपति जेम्स अब्राहम गारफिल्डलार्ई २ जुलाई १८८१ मा वासिङ्टन डीसीमा गोली हानी हत्या गरेपछि अमेरिकामा सरकारी सेवामा योग्यता, अनुभव र दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेबारे व्यापक विमर्श सुरु भयो । अन्ततः सन् १८८३ मा पेन्डल्टेन एक्ट पारित गरी प्रशासनमा मेरिट प्रणाली लागू गरियो ।
नेपालको राजनीति र प्रशासनमा प्राचीन शाहकाल, राणाकाल, आधुनिक शाहकाल, बहुदल र गणतन्त्रमा पनि लुट र विकृत प्रणाली कुनै न कुनै रूपमा कायम छ । राजनीतिक क्षेत्रमा लुट प्रणाली अन्तर्गत संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्य वा अरू आयोग वा शैक्षिक संस्थाका प्रमुख वा राजदूत नियुक्ति वा संसद सदस्यको टिकट वितरणमा पैसा, नाता, गुट, चाकडी प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् ।
राजनीति र प्रशासनमा समावेशिताको सिद्धान्त अपनाउनु अति राम्रो त हो, तर हामीले समावेशिता शब्दको हामीले अधिकतम दुरुपयोग गर्‍यौं र यसलाई नाता, पैसा, चाकडी र गुटमा बेच्यौं । समावेशिताका नाममा इमानदार र त्यागी कार्यकर्तालाई पाखा लगायौं अनि चाकडीबाज वा गुटभित्रको नेता, नेताकी श्रीमती, छोराछोरी, सालासाली वा नातेदार, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिन थाल्यौं । समावेशी सिद्धान्तलाई हामीले नै विकृत बनायौं । यही हो— लुट वा विकृत प्रणाली ।
लोकसेवा आयोगको गठनपछि सार्वजनिक प्रशासनमा केही मात्रामा भए पनि योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रणाली अर्थात् मेरिट प्रणाली कायम हुंँदै आएको छ । नेपालका संवैधानिक अंगमध्ये काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी वहनमा लोकसेवा आयोग नै सबैभन्दा बढी निष्पक्ष, प्रभावकारी र आस्थाको केन्द्र बन्न सफल छ । उसले सरकारको मागलाई कार्यान्वयन मात्र गर्दै आएको हो । तर अहिले यस्तो आयोगको विरोध भैरहेको छ ।
केही समययता लुट प्रणाली सार्वजनिक प्रशासनमा पनि हावी हुन थालेको छ । प्रशासनमा राजनीति घुस्न थाल्यो भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आइरहेको छ । सरकारी संरचना हुँंदाहुँंदै कुनै काम र जवाफदेहिता नभएका सल्लाहकारहरूले मन्त्रालय र कार्यालयमा दिनहुँ गैरकानुनी रूपमा आदेश दिई काम गराइरहेका छन् । स्वस्थ राजनीतिक र प्रशासनिकप्रणालीको लक्षण होइन यो ।
अर्कातिर, शिक्षा सेवा र प्रशासन सेवामा राजनीतीकरण गरियो । शिक्षक र कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीको काम छोडेर पार्टीका कार्यक्रममा हिँड्न थालेपछि अहिले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन सेवा ध्वस्तप्रायः भएको छ । यसलाई सुधार्न कुनै पार्टीको सरकार चाहँदैन । बडो गजब छनेपालमा ! सरकारको तलब खाएर पार्टीको काम गर्न दिने व्यवस्था नेपालबाहेक अन्यत्र सायदै होला । यसबाट नेपालमा राजस्वको दुरुपयोग र हिनामिना भइरहेको छ ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर नै ९,१६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको हो । तर, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्थातथा सुशासन समितिले विज्ञापन रोकी करारमा कर्मचारीभर्ना गरी काम गर्न निर्देशन दियो, जसले संसारभर बदनाम भएको लुट र विकृत प्रणाली नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कानुनी रूपमै लागू गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
संघीय सरकारको असहमतिका बावजुद राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिएको निर्देर्शन कानुनसम्मत छैन र विज्ञापन पनि रोकिँदैन भनेर सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक रूपमा बोलिसक्नुभएको छ । समितिको निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु राम्रो होइन, न समिति–सरकार द्वन्द्व हुनु उचित हो । यसमा सरकार र समितिले छलफलबाट उपयुक्त निकास निकाल्नु जरुरी छ ।
अहिले देश संसारभर बदनाम लुट र संरक्षणवादी नियुक्ति प्रणाली वा मेरिट प्रणाली कुन अपनाउने भन्ने विवादमा फस्न गएको छ । कतिपयले यसलाई सत्ताधारी पार्टीको रणनीतिक योजनाका रूपमा पनि अर्थ्याइरहेका छन् ।
अहिलेको सत्ताधारी पार्टीले जेजस्तो विधि वा नीति चाह्यो, त्यस्तै बनाउन सक्छ । संसारभर राम्रो मानिएको प्रतिस्पर्धात्मक तथा क्षमतायुक्त योग्यता प्रणालीलाई हटाएर लुट प्रणालीमा गएपछि त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असर केकस्तो होला, यो अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो । यसले देशलाई फेरि अर्को संक्रमणकालमा लान पनि सक्छ । यसतर्फ हामी चिन्तित हुनुपर्ने भएको छ ।
राजनीति र प्रशासनमा लुट प्रणाली लागू गर्नु भनेको नेपाललाई सन् १८२९ को अवस्थामा लानु हो । दुई सय वर्षअगाडि जाने कि दुई सय वर्षपछाडि, अहिलेको छलफलको विषय यही हो ।
करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु भनेको कुनै योग्यता, अनुभव र कार्यदक्षता नभएकालाई जागिर दिनु हो र एकपल्ट जागिर दिएपछि नेपालमा तिनलाई हटाउन पनि सकिँदैन । आन्दोलन गर्न पार्टीले नै सिकाउंँछ । यो अवस्थामा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम गराउनु कति ठीक होला ?
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारणसहज ढंगले काम नभएकोप्रति समितिले चासो र सरोकार देखाउनु निकै सराहनीय हो । अहिले पनि केन्द्रमा अनावश्यक कर्मचारी राखिएका छन्, तिनलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी आप्र्तूि नहुन्जेल समितिले संघीय सरकारलाई संघबाट स्थानीय तह र प्रदेशमाकर्मचारी खटनपटन गर्न निर्देशन गरेको भए बढीसान्दर्भिक हुन्थ्यो । समितिको निर्णय परिपक्व र कानुनसम्मत ढंगले आएको पनि मानिन्थ्यो ।
प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गर्ने छलफल र निर्णयले राष्ट्रको मुलुकी प्रशासनको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन असर र प्रभाव पार्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन । तर, यसले आज गरेको निर्णयले भावी पिढीको भविष्य सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन भनेरसोच्नुपर्छ । अग्रगमन यसको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ र योग्यता प्रणालीलाई नेपालको राजनीति र प्रशासनमास्थापित गराउन जोड दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लुट प्रणाली अपनायौं भने हामी अझै सय वर्षपछाडिधकेलिन सक्छौं ।
प्रकाशित : असार २, २०७६ ०८:००
असार २, २०७६ निर्मला ढकाल
घटना त टुंगियो, तर म मानसिक रूपमा विक्षिप्त जस्तै बनें । त्रिवि परिसर टेक्दा पनि त्यही घटना आँखाअघि आउन थाल्यो । हातमा सर्टिफिकेटको थुप्रो, नामअगाडि ‘डा.,’ मानिएका बौद्धिक, तर महिलाप्रतिको व्यवहार ?
‘फेसबुक र मेसेन्जरमा मलाई बेवास्ता गरे पनि क्लासमा भेट अवश्य हुन्छ, कसरी बच्नुहुन्छ ? विचार गर्नुस् ।’ शब्दशः यही बोलेको थियो त्यो विद्यार्थीले !
बारम्बार अनावश्यक मेसेज गर्नेहरूलाई झैं उसलाई पनि मैले ब्लक गरेकी थिएँ । कलेज विद्यार्थी युनियनमा आबद्ध उसले त्यसअघि लेखेको थियो— ‘मलाई सहयोग गरे तपाईंलाई राम्रो हुन्छ, आवश्यकता दुवैको हुन सक्छ, यहाँ टिक्न मन छ भने भनेको मान्नुस् ... ... ।’
जे भोगें, त्यो मेरो मात्र भोगाइ होइन । घरबाहिर निस्किने प्रायः महिलाको भोगाइ यस्तै छ । हामी प्रतिकार गर्न सक्दैनौं, संकोचले रोक्छ । परिवार, इस्टमित्र, समाजले के भन्ला भन्ने डर अझै हावी छ हामीमा । कहीं न कहीं ‘भिक्टिम ब्लेमिङ कल्चर’ बाट हामी प्रभावित छौं । महिला भन्नेबित्तिकै सहनशील हुनुपर्ने पुरातन ‘अब्जेक्ट’ बाट हामी उम्किन सकेका छैनौं । घरभित्र आमा, बहिनी, श्रीमती, छोरीलाई सम्मान गर्न सक्ने पुरुष घरबाट निस्किनेबित्तिकै महिलाको अस्तित्वस्वीकार गर्न किन गाह्रो मान्छ ? केहीअंग फरक हुनेबित्तिकै यति बलियोबन्न सकिन्छ र ?
महिलाको लडाइँ पुरुषसँगनभई हैकमवादी सोच जन्माउने,हुर्काउने र विकास गर्ने सामाजिकप्रवृत्ति, सिकाइ, संस्कारसँग हो । व्यावहारिक रूपमै विभेद हटाउन परम्परादेखिका महिलाकेन्द्रित लाञ्छना, आरोप, मान्यता तथा दृष्टिकोण हटाउन जरुरी छ । अमिल्दा मान्यता, हामी पुरुषसरह हुन सक्दैनौं भन्ने सोच डिलिट गरिहालौं ।
प्रकाशित : असार २, २०७६ ०७:५९